မီးလွတ်ကျင့်စဉ်ဆိုတာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » မီးလွတ်ကျင့်စဉ်ဆိုတာ…
Posted by who who on Oct 21, 2011 in Buddhism, Creative Writing, Science & Religion | 10 comments
ဒီနေ့ ကျနော် ရေးချင်တာလေးကတော့“မီးလွတ်ကျင့်စဉ်” ဆိုတာလေးပေါ့။
ဟိုးအတိတ်တစ်ချိန်တုန်းကပေါ့။ ကျနော် တရားပွဲတစ်ခုကို သွားနာတော့ အဲဒီတရားပွဲက “ အထူးအလုပ်ပေး မီးလွတ်တရား” လို့ ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီတော့ ကျနော် စဉ်းစားတယ်။ မီးလွတ်က ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲပေ့ါ။
အင်း.. တစ်ယောက်ယောက်ကို မေးကြည့်ဦးမယ်ဆိုပီး ဘေးက လူတစ်ယောက်ကို မေးတော့ သူကပြောတယ်။ အင်း..တရားပွဲက တနေကုန်ဆိုတော့ လူတွေက ထမင်းဗူးတွေနဲ့ အဝေးက လာရတော့ အိမ်မှာ ချက်ချိန်မရှိလို့ မီးငြိမ်းလို့ “မီးငြိမ်းတရားပွဲ”လို့ ရေးထားတာ နေမှာပေါ့လို့ဖြေတယ်။ ဒါပေမယ့် သူလည်း ကောင်းကောင်းမသိဘူးလို့ ပြန်ဖြေရှာတယ်။
ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ဘာရယ်မဟုတ် ဒီမီးငြိမ်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးကို တရားဟောမယ့် ဆရာတော် ကြွမလာခင် လျှောက်စဉ်းစားကြည့်နေတယ်။ ကျနော် အရင်က ကြားဖူးတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်တွေးနေတာပေါ့။ မီးလွတ် ကျင့်စဉ် ဆိုတာ ငှက်ပျောသီးပဲစားပြီး မီးနဲ့ချက်တာ တခုမှမစားဘဲ ကျင့်တာကို ကြားဖူးတာရှိတော့ အဲဒီလိုများလားပေါ့။ လျှောက်တွေးသာ နေတာပါ။ အဖြေမှန်ကို အဲတုန်းက မသိခဲ့ပါဘူး။ နောက်မှပဲ သိတော့တယ်။
အဲဒီတော့ ကျနော့်လို မဖြစ်ရလေအောင် ကျနော် သိလိုက်ရ တဲ့ “ မီးလွတ်ကျင့်စဉ်” ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ “မီးငြိမ်းကျင့်စဉ်”ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခု အားလုံးကို သိစေချင်လို့ ဝေငှလိုက်ပါရစေနော်။
လူတိုင်းဟာ မီး(၁၁)မီး အလောင်ခံနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် တချို့က (၁၁)မီး ငြိမ်းရပါလို၏လို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဘုရားကပ်တဲ့အခါ ရေစစ်ဆိုလည်း (၁၁)ခု၊ ပစ္စည်းတွေကို (၁၁)ခုစီဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လှူကြတာတွေ တွေ့ဖူးမှာပေါ့။ အဲဒီ (၁၁)မီးက ဘာတွေလဲဆိုတော့-
(၁) ချစ်စရာထင်ခြင်း (လောဘမီး)
(၂) မုန်းစရာထင်ခြင်း (ဒေါသမီး)
(၃) အဟုတ်ထင်ခြင်း (မောဟမီး)
ဒီ (၃) ခုကို အရင်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ ဒီ (၃) ခုကနေ ကိုယ်လွတ်ရဲ့လား ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အို..ချစ်စရာတွေကတော့ ထင်လိုက်ရတာ မပြောနဲ့။ မတွေ့ရမနေနိုင်၊မကြားရမနေနိုင်၊ ဒါတွေက မီးအရှိန်နဲ့ကို လောင်နေတာနော်။ နောက်..ကိုယ်မမြင်ချင်တဲ့ မျက်နှာမြင်ရပြန်ပြီ။ ဟင်း.. စိတ်ပျက်စရာပဲ၊ ဘာပဲ ညာပဲပေါ့။ ဒါလည်း ဒေါသမီးတွေလေ။ တဟုန်းဟုန်းနဲ့ပေါ့။ ကိုယ်လုပ်တာမှ အဟုတ်ထင်၊ သူများလုပ်ရင် ကိုယ့်လိုဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ မီးတွေလည်း လောင်ချင်တိုင်း လောင်လို့ပေါ့။ ဒါတောင်(၃)ခုပဲ ရှိသေးတယ်နော်။
ဘယ် (၁) ခုတော့ လွတ်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရပြီလဲ?လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးနေမိတယ်။
အဖြေကတော့ သုံးခုလုံး ဟုန်းဟုန်းတောက်နေပါတယ်ဆိုတာပဲ ထွက်လာပါတယ်။
ဒါဆို နောက်ဆက်ကြဦးစို့။ အထက်ကသုံးမီးတော့ မလွတ်ဘူးပေါ့။ နောက်မီးတွေများ လွတ်နိုင်မလား။ ဆက်ကြည့်ကြဦးစို့ နော်-
ဒီ (၄) မျိုး တစ်သုတ် မှတ်လိုက်နော်။ လူတိုင်းဟာ မွေးဖွားခြင်း ခံခဲ့ ရတာချည်းပဲ။
မွေးလာကတည်းက ရီပြီးမွေးတာလား? ငိုပြီး မွေးတာလား ? စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ ငိုနေမှတော့ ဒုက္ခဆင်းရဲလို့ပေါ့။
အဲဒီကနေ မအိုချင်ပါဘူး ဆိုလည်း တားလို့ ရပါ့မလား။ အိုခြင်းမီးတွေ လောင်နေလိုက်တာ။
ဒီကြားထဲက နာခြင်းမီးတွေကလည်း အရှိန်ကောင်း နေလိုက်တာ။ဟိုလိုဖြစ်လိုက်၊ ဒီလိုဖြစ်လိုက်၊ ရှာမရတဲ့ ရောဂါရော၊ ရှာရတာတွေရော စုံလို့၊ အခုများဆို ရောဂါအသစ် အသစ်တွေကို ထွက်လာလိုက်ကြတာ။ ဆေးပညာတောင် လိုက်လို့ မမှီနိုင်ဘူး။ ဒါ..နာခြင်းမီးတွေ လောင်နေတာပဲ။
နာပြီးရင် သေဖို့ သာပြင်ပေတော့။ မသေမယ့် လူရယ်လို့ လောကမှာ မရှိပါဘူး။ သေခြင်း မီးတွေ အလောင်ခံ ရဦးမှာ ကျိန်းသေပဲ။ ဒါဆို ဒီ(၄)မျိုးကရော လွတ်နိုင်ပါသေးလား?။ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်စဉ်းစားနော်။ မလွတ်ပါဘူး။ အင်း…ခုပြောပြီးသား မီး(၇)မျိုးကနေတော့ လွတ်တာတစ်ခုမှ မတွေ့ပါဘူးနော်။ နောက်ထပ်ကျန်တဲ့(၄)မျိုး တော့ လွတ်နိုင်လောက်ပါရဲ့လို့တွေးနေရင် အခု ဆက်ပြောမယ်နော်။
ဒါကတော့ နောက်ဆုံး(၄)မီးပဲ။ ကျနော့်အဖို့တော့ ပိုတောင်ဟုန်းဟုန်းတောက် နေသေးတယ် ထင်တာပါပဲ။ အို..တစ်ခုခုဆို စိတ်တွေပူလိုက်ရတာ၊ စိုးရိမ်လိုက်ရတာ။ တစ်ခါတလေများ မရှိရှိတာလိုက်ပူနေလိုက်တာ ပြောမနေနဲ့။ စိုးရိမ်စရာ မရှိရင် မနေတတ် သလောက်ပဲ။ ကျနော့အဖြစ်ကတော့ အခုတောင် ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တာတွေအတွက် လိုက်ပူ နေလို့ ဒီလောက်စာတွေ ရေးနေတာပေါ့။
သြော်..ကျနော့မီးက တော်တော် အားတွေ ကောင်းနေလိုက်ပါလားလို့ ရေးရင်းမြင်နေရပါပြီ။ အဲဒီ စိုးရိမ်မှု့ကြောင့် ငိုရပေါင်းလည်း မရေနိုင်တော့ဘူး။ ငိုကြွေးရမှတော့ ကိုယ်ရော၊ စိတ်ရော ချမ်းသာပါတော့မလား ?။
ဒီ(၄)မီးက Series လို ဆက်နေတော့ တခုကြောင့် နောက်တခု တွေမီးဆက် ကူးသွားလိုက်တာ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ တစ်ကိုယ်လုံးကိုမီးဟုန်းဟုန်း တောက်ပြီး လောင်ကောင်းနေတာပေါ့။ ဒါဟာ ကိုယ့်တစ်ယောက် ထဲလားဆိုတော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲနော်။
သူများတွေလိုက်ကြည့်တော့လည်း လူတိုင်းလိုလို ဒီလေးမီးက လောင်ပြနေတာ မြင်ရတော့လေ….အင်း ဘာနဲ့တူနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ မီးပုံပြပွဲနဲ့ တူတယ်လို့ ပြောရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့။ ဒါတောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပူမှန်း မသိအောင် မီးပုံထဲမှာ ပျော်နေကြတာနော်။ တော်တော် သတ္တိကောင်းနေလိုက်ကြတာ။ ဒီ(၁၁)မီးလောက်ကတော့ အေးဆေးပေါ့လေ။
သာမာန် အပူမီးက ရေတစ်ခွက်နဲ့လည်း ငြိမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီမီးကတော့ ဘယ်ရေနဲ့ နိုင်လိမ့်မလဲ။ အားကောင်းလွန်းလို့ တော်ရုံနဲ့တော့ ငြိမ်းလို့ရမယ်မထင်။ ဘယ်လိုငြိမ်းရပါ့မလဲဆိုတော့ တရားရေအေးနဲ့သာ ငြိမ်းနိုင်ပါတယ်တဲ့။
တရားအားထုတ်စဉ် ဘယ်မီးတွေများ ငြိမ်းနေပါလိမ့်မယ်လို့ ဆက်တွေးလိုက်တော့….
လူတစ်ယောက် တရားအားထုတ် နေစဉ်မှာ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်က ကောင်းကောင်း control လုပ်နိုင်မယ် ဆိုရင် ဘာတွေငြိမ်းသွားမလဲ။
၁ – စိုးရိမ်ခြင်းမီးတွေ ငြိမ်းမယ်။
အဲဒီ မီးစကို ဆွဲထုတ် လိုက်တာနဲ့ သူနဲ့ တဆက်တည်းဖြစ်တဲ့(၄)စ ငြိမ်းသွားပြီပဲ။
၂- မစိုးရိမ်တော့ မငိုကြွေးရတော့ဘူးနော်။ ငိုကြွေးခြင်းမီး ငြိမ်းနေပါပြီ။
၃- စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ ငိုကြွေးခြင်းမီးတွေ ငြိမ်းနေတော့ ကိုယ်လည်းချမ်းသာနေပြီမို့ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းမီးလည်း ငြိမ်းနေပါပေါ့လား။
၄- အနေနဲ့ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းမရှိသလို စိတ်ဆင်းရဲခြင်းလည်း ကင်းနေပြီမို့ ဒီစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့မီးလည်း ငြိမ်းနေပါပြီနော်။
အော် တရားအားထုတ်နေစဉ်မှာ ဒီလေးမီးတော့ သက်သာနေပြီ။ မီးလေးစတော့ ဆွဲထုတ်နိုင်လို့ ငြိမ်းနေကြပြီဆိုတာလေး မြင်လာပါပြီ။ ဒါတင်ပဲလားလို့ ဆက်လိုက်တော့ နောက်ထပ်ငြိမ်းတာတွေပါ ထပ်တွေ့လာရ ပါတယ်။
နောက် ဘာငြိမ်းနိုင်မလဲ ဆိုတော့ တရားအားထုတ်စဉ်မှာ ကိုယ့်စိတ်ကို ငြိမ်းအေးအောင်ထား နေနိုင်လို့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေ အဝင်မခံတဲ့အတွက် ရှေ့သုံးမီးဖြစ်တဲ့
၇- မောဟမီးတွေပါ ငြိမ်းနေပြန်ပါပြီ။
ဘယ်လိုလုပ်ငြိမ်းရသလဲဆိုတော့ လောဘဖြစ်ရင် တန်းသိမယ်။ ဒေါသဖြစ်ရင် တန်းသိမယ်။ မောဟ လည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ ဘာလို့ တန်းသိတာလဲ။ တန်းသိအောင် သတိနဲ့ စောင့်ကြည့်နေလို့ပေါ့။ ဒါကိုပဲ တရားထိုင်တယ်လို့ ပြောတာ။
အဲဒီတော့ အစောက (၄) မီးနဲ့ အခု (၃)မီး ပေါင်း(၇)မီး ငြိမ်းနေနိုင်ပြီပေါ့။
ဒါဆို ကျန်တာ အလယ်(၄)မီး ရှိသေးတယ်။ အဲဒီထဲက မွေးဖွားခြင်း လို့ခေါ်တဲ့ ဇာတိမီး တစ်ခုကတော့ ငြိမ်းနိုင်ပါတယ်တဲ့။
၈- ဇာတိမီးလည်း ငြိမ်းနေပေါ့။
ကျန်တဲ့ အို၊ နာ၊ သေကတော့ ဘယ်သူမှငြိမ်း လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ တရားထိုင်ရင်းနဲ့ တောင် နာခြင်း မီးတွေ အလောင်ခံ၊ အိုခြင်းမီးတွေ အလောင်ခံနေရတာ၊ သေခြင်းမီးကလည်း တရားထိုင်ခြင်းနဲ့ မငြိမ်းနိုင်လို့ ဒီ(၃)မီးကတော့ ဆက်လောင်နေဦးမှာပါပဲတဲ့။
ဒါဆိုရင် (၁၁)မီးထဲက တရားထိုင်နေရင်းနဲ့ (၈)မီး ဆွဲနှုတ်နိုင်ပါတယ်။
ကဲ.. (၁၁) မီးလောင်မယ့်အစား (၃)မီးပဲ အလောင်ခံရတော့ မသက်သာပေဘူးလား။ ဒါကြောင့် တရား တစ်ခါထိုင်ရင် ဒီမီး(၈)မီးတော့ ဆွဲထုတ်နေနိုင်ပြီလို့ မြင်ထားလိုက်ပါပြီ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ပုံမှန်ချိန်မှာ အလောင်ခံနေရတဲ့ (၁၁)မီးထဲကမှ တရားထိုင်ချိန်မှာ (၈)မီးဆွဲထုတ်လိုက်မယ် ဆိုရင် ကျန်တဲ့ အပူလောက်ပဲခံရတော့မှာပါနော်။
ဒါလောက်တောင် အပူတွေ သက်သာသွားမယ့် ကျင့်စဉ်မို့ မီးငြိမ်းတရား (သို့မဟုတ်) မီးလွတ်တရားလို့ ခေါ်ကြတာပေါ့။ ဒါဆို ကျနော်တို့အနေနဲ့ ပူလောင်မှု့တွေ လျှော့ချင်ရင် တရားမထိုင်သင့်ပေဘူးလား။ ထိုင်သင့်တယ် လို့ ထင်ရင် စကြိုးစားပေတော့။
အင်း ကြာတော့ ဒီမီးတွေ အလောင်ခံရလွန်းလို့ ဘယ်တော့ ပြာဖြစ်မလဲတောင် မသိပါဘူး။
တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ ဆံပင်တွေတောင် ဖြူလာတယ်ဆိုရင်ပဲ အော်ငါတော့ မီးလောင်ခံရလွန်းလို့ ဆံပင်တွေ တောင် ပြာရောင်ပေါက်လာပါပေါ့လားလို့ တွေးလို့တောင်ရနေပြီနော်။
အဲဒီတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒေါသထွက်ရင် ဟာ.. မီးတွေ လောင်နေပြီလို့သာ ပြန်ကြည့်ပေတော့။ ဒီလိုပဲ ဒီ(၁၁)မျိုးထဲက တစ်ခုခုဖြစ်လာရင် မီးတွေ လောင်နေပြီ။ မြန်မြန်ငြိမ်းမှပဲလို့သာ သတိနဲ့ နေပေးရပါတော့မယ်။ ကဲ..ဒါဆိုရင်တော့ ဒီနေ့(၁၁)မီး အကြောင်း ကောင်းကောင်း သိသွားပြီဖြစ်လို့၊ (၁၁)မီးမှ (၈)မီးနှုတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်။
ဒါပေမယ့် ဆုတောင်းရုံနဲ့ တော့ မရဘူးနော်…။ ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားအားထုတ်မှ ရမှာမို့ လက်တွေ့စလို့ မီးစတွေ ဆွဲနုတ်ကြပါစို့လား။
ကျွန်တော်လို လူပိန်းတောင် နားလည်အောင်
ဘယ်သူမှ မရှောင်နိုင်တဲ့ အို၊ နာ၊ သေ ကတော့
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကျန် ၈ မီး ကိုတော့ ရှောင်နိုင်အောင်
ကြိုးစားစ အချိန်ပေါ့ဗျာ။ ကျေးဇူးပါ။
ကျွန်တော် ၇ တန်းကျောင်းသား ဘဝက
မိုးကုတ် ဝိပဿနာ မှာ သင်္ကြန် တရားစခန်း ဝင်ခဲ့ဖူးလို့ 
မိုးကုတ် က အတိုင်း တရားထိုင်တတ်တယ်
နေ့ စဉ် သီးသန့် အချိန်ပေး ပြီးတော့ မထိုင်ဖြစ်ပေမယ့်
အားတဲ့ အချိန် ၊ စိတ်ထဲမှာ ရှင်းနေတဲ့ အချိန်မျိုးဆိုရင်တော့
ဝင်လေ ထွက်လေ မှတ် ဖြစ်တယ်
အဲဒီလို ကော အကျိုးရှိလား ဗျ
ဟုတ်ကဲ့။ ကိုယ့်စိတ်ကလေးကို သတိနဲ့ စောင့်ရှောက်နေနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ချမ်းသာနေမှာပါပဲ။ ဒါကြောင့် အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်မို့ သတိလက်ကိုင်ထားလို့ ကြိုးစားပေးစေလိုပါတယ်။
၁၁မီးငြိမ်းတဲ့ အမွှေးတိုင် တီဗီမှာ ကြော်ငြာကြည့်ဘူးတုန်းက အမွှေးတိုင်နာမည်ဘဲ သိလိုက်တာ။ ၁၁မီးကို ဘာတွေမှန်းမသိဘူး။ အခုမှ ရှင်းရှင်းလင်းသိခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
Rose လဲ အမြဲဒေါသမီးလောင်နေတက်တာ။ အလုပ်မှာစိတ်ရှုပ်ရတဲ့ အချိန်က များတာကိုး။ အခန့်မသင့်ကိုယ့်စိတ်နဲ့မတွေ့တိုင်း ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နေရတာ။ ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ တရားကို မှတ်ရတာတော်တော်ဆိုးပါတယ်။ သတိ ပြန်သွင်းဖို့ ကြိုးစားရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိရပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ (၁၁) မီးကတော်တော်မငြိမ်းနိုင်ဘူးနော်။ ဒီစာလေးကို ဖတ်ရတဲ့ အတွက် တော်တော်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အမှတ် သတိ ပြန်သွင်းဖို့ ကြိုးစားရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိရပါပြီ။
rose ကို နည်းကောင်းလေးတစ်ခုပေးဦးမယ်။ အကယ်လို့များအဲလို ဒေါသတွေ တအားထွက်နေရင်လေ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပြန်ကြည့်ပြီး ငါတော့ ဒေါသထွက်နေပြီလို့ လိုက်မှတ်ပေးကြည့်။ အဲလိုမှတ်တုန်းကို ဒေါသအရှိန်က ကောင်းနေဆဲဆိုရင် ဒီဒေါသရဲ့ ပူလောင် ပုံကိုပါ မြင်အောင်ရှုလို့ လိုက်မှတ်ပေးလိုက်။ အဲလို ဒေါသဖြစ်ရင် စိတ်မှာ ဒေါသဖြစ်နေပြီလို့ သိပေးနေရင်းက တဖြည်းဖြည်း ဒေါသအရှိန်လေးတွေ လျော့လျော့လာတာမြင်ပါလိမ့်မယ်။ လျော့လာရင်းကမှ နောက်ဆုံးတော့ ဒေါသတွေ ကွယ်ပျောက်သွားတာကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။ အဲလို ဒေါသမရှိတော့တဲ့အခါထိကိုပဲ ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးလို့ လိုက်သိပေးနေလိုက်ပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဒေါသဖြစ်တုန်းက အပူတွေ ပျောက်ပြီး ငြိမ်းအေးလာတာကိုပါ ခံစားလာရမယ်နော်။ စိတ်တော့နည်းနည်းရှည်ရမယ်။ အဲလိုသာ မှတ်နိုင်ခဲ့ရင် အဲဒီ ဖြစ်စဉ်ကနေမှ အသားတင်ရလဒ် ကို ပြန်ကောက်ကြည့်လို့ရပြီ။
ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန် စိတ်မှာ တရစပ်ပူလောင်နေတာကို ကိုယ်တိုင်ခံစားရပြီး ဒေါသ ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ စိတ်မှာ အပူပျောက်လို့ အငြိမ်းဓါတ်လေးရောက်လာတာ တွေ့ရမယ်နော်။ ဒါသည်ပင် တဒင်္ဂနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ သိလိုက်ပါ။ အော် နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ အဝေးကြီးမှတ်တယ်။ ကိလေသာ ကင်းတဲ့ အရသာလေးပါလားလို့ ကိုယ်တိုင် သိနိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါနော်။ တကယ့် နိဗ္ဗာန်ကတော့ အားထုတ်ကျင့်ကြံမှုကနေမှ ရောက်နိုင်တာပေါ့။ ခုလို တဒင်္ဂနိဗ္ဗာန်လေးကိုလည်း အရင်ဆုံး အမြည်းအနေနဲ့ မြည်းစမ်းကြည့်စေချင်လို့ ဒီနည်းလေး ပေးလိုက်ပါရစေ။ ဒေါသထွက်တိုင်း တစ်ဒင်္ဂနိဗ္ဗာန်ကို တွေ့အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါ။ လောဘတွေ ဖြစ်နေရင်လည်း တဒင်္ဂနိဗ္ဗာန်နဲ့ တွေ့အောင် ကြိုးစားလိုက်ပါလားလို့ တိုက်တွန်းအကြံပေးလိုက်ရပါတော့သည်။
ကျေ:ဇူးတင်ပါတယ် who who ရေ။ မဖတ်မိဘူး ဒီ post လေးကို၊ ကျေးဇူးတင်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။ အတက်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားသွားပါမယ်။ ဒေါသဖြစ်နေတော့ တော်တော်ပူလောင်တယ်။ နာကျင်တဲ့ရောဂါ ဝေဒနာ ဖြစ်နေတဲ့အချိန် တောင်မှတ် ရတာ လွယ်တယ်။ ဒေါသဖြစ်တဲ့ အချိန်က ပိုခက်တယ်။နည်းလမ်း ရသွားပါတယ်။
စားရင်လည်းမီးလွတ်အောင်စား ၊ ၀တ်ရင်လည်းမီးလွတ်အောင်ဝတ် ၊ နေရင်လည်းမီးလွတ်အောင်နေ ၊
ဖို့လိုပါတယ် ၊ သည်ရုပ်ခန္ဓာအသက်ရှည်၍အနာကင်းအောင်ဗုဒ္ဓအလိုကျမီးလွတ်စားကြပါစို့..။